दसैंलाई दस किताब- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
दसैंलाई दस किताब
काठमाडौँ — साहित्यमा रूचि नै नभएका युवालाई पनि नेपाली साहित्य पढ्नतर्फ आकर्षित गर्ने लेखक हुन्, सुबिन भट्टराई । असोजको पहिलो साता आफ्नो पाँचौं कृति सार्वजनिक गरेका उनी लेखनमा जति मिहिनेत गर्छन्, पठनमा पनि त्यति नै लगनशील छन् । युवा पाठकमाझ लोकप्रिय उनी दसैं बिदामा निम्न १० किताब पढ्न सिफारिस गर्छन् :
।१। नरेन्द्र दाइ
नरेन्द्र दाइ मात्र होइन, बीपीका अन्य किताब पनि नेपाली साहित्यप्रेमीले पढ्नै पर्छ । उनका आख्यानमा पाइने ‘सिनेम्याटिक फ्लेवर’ ले जोकोहीलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छ । एक पाठकलाई अर्कै दुनियाँमा पुर्‍याइदिन सक्ने खुबी बीपीको छ । अझ ‘नरेन्द्र दाइ’ मा चित्रण गरिएको मुनरिया र गौरीका प्रेमको कुनै तोड नै छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । गहकिला तर्क, घटनाक्रमका सूक्ष्म विवरण र बेजोड भाषाको प्रयोग गर्न सक्ने बीपीमाथि अन्य लेखकभन्दा बढी शोध भएका छन् ।
।२। ध्रुवचन्द्रका एकाउन्न कथा
बीपीजस्तै ध्रुवचन्द्र गौतमका पनि सबै कृति ‘मास्टरपिस’ हुन् । ‘अग्निदत्तंअग्निदत्त’, ‘अलिखित’ जस्ता कृतिले अधिकतम चिनिएका उनको ‘ध्रुवचन्द्रका एकाउन्न कथा’ भने तुलनात्मक हिसाबले कम चर्चा गरिएको पुस्तकमा पर्छ । नेपाली साहित्यमा श्वेत व्यंग्यमा मज्जाले कलम चलाउन सक्ने थोरै व्यक्तिमा उनी अग्रपंक्तिमै पर्छन् । उनको उच्चस्तरीय भाषाशैलीले जोकोहीको मन लोभ्याउन सक्छ ।
।३। घामका पाइलाहरू
मदन पुरस्कार प्राप्त यो पुस्तक त ‘मास्टरपिस’ नै हो । धच गोतामेका संस्मरण पनि यो पुस्तक जत्तिकै पठनीय छन् । धेरैले ‘घामका पाइलाहरू’ लाई रुवाउने पुस्तकका रूपमा चित्रण गरेका छन् । पढ्दै तराईको मीठो बास्ना आउने र त्यहाँका व्यक्तिलाई उठाएर सर्लक्कै कागजमा उतारेको अनुभूति उनको पुस्तकमा पाइन्छ । चरणवद्ध रूपमा फेरिँदै गएको नेपाली समाजलाई नजिकबाट बुझ्न यो पुस्तक निकै फलदायी सिद्ध हुन सक्छ ।
यो पुस्तक आफैंमा एक ‘मास्टरपिस’ हुँदाहँुदै पनि निकै कमले मात्र पढे–सुनेका छन् । बालमनोविज्ञानको मीठो चित्रण र दिदीभाइ तथा दाजुबहिनीको सम्बन्धको अनुपम नमुना महसुस गर्नकै लागि भए पनि दसैंमा यो पुस्तक पढ्नै पर्छ । अहिलेको समयमा
पढ्दा केहीलाई यो असामान्य लाग्न पनि सक्छ । तर, पहिलेको त्यो समयका पात्रको मनोविज्ञान बुझ्न चाहनेका लागि यो एक अद्भुत सिर्जना हो ।
।५। रावी पार एन्ड अदर स्टोरिज
सम्पूर्ण सिंह कालरा अर्थात् गुल्जारका हरेक रचना विश्वविख्यात छन् । कथा बुन्दै लगेर अन्त्यमा सिरिंग पार्ने गरी ‘पन्च’ हान्न सक्ने खुबी गुल्जारको कलममा रहेको छ । उम्दा हिन्दी साहित्य पढ्न मन लाग्ने जोकोहीका लागि गुल्जार राम्रो छनोट हुन सक्नेमा दुई मत नै छैन । विभिन्न भाषामा अनुवादित यस पुस्तकमा समाविष्ट अधिकांश रचनाले भारत विभाजनको समयको कथा बोकेका छन् । तिनले बेलाबेला झस्काउँछन्, बेलाबेला भाव विह्वल तुल्याउँछन् ।
।६। द बुक थिफ
मार्कस जुसाकको यो पुस्तकलाई पछि चलचित्रमा पनि उतारियो । युद्धकालीन परिस्थितिलाई सुन्दर ढंगले चित्रण गरिएको यस पुस्तकको भाषा र कथा वाचनले धेरैलाई तानेको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धताका नाजी शासनले त्रस्त समाजको चित्रण गर्न जुसाकले लिजल नामक पात्रबाट कथा वाचन गराएका छन् । भावोत्तेजक पुस्तक पढ्न इच्छा राख्ने जोकोहीका लागि यो एक उचित छनोट हुन सक्छ ।
।७। ट्युजडेज विद मोरी
यस पुस्तकमा प्रयोग भएका जस्ता दार्शनिक संवाद निकै कममा मात्र पाइन्छन् । यस पुस्तक पढिसकेका सबैजसोले यसलाई जीवनोपयोगी पाठ पढाउने पुस्तकका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । धेरैभन्दा धेरैलाई यस पुस्तकद्वारा प्रेरित तुल्याउन सकेकाले मिच एल्बमको यो प्रयत्नलाई सफल मान्न सकिन्छ । यसमा आवश्यकताभन्दा धेरै दर्शन चर्चा गर्न खोजेको भनी समीक्षा गर्नेको पनि कमी भने छैन ।
।८। लाइक द फ्लोइङ रिभर
पाओलो कोहेलोका जीवनका भोगाइ, अनुभव तथा अखबारी स्तम्भ एकै ठाउँमा संकलित पुस्तक हो, ‘लाइक द फ्लोइङ रिभर’ । यसमा प्रयोग भएको सरल भाषाशैलीका कारण यसलाई धेरैले रुचाउन सक्नेमा शंका छैन । पाओलोका अन्य पुस्तकका तुलनामा यो अलि कम चर्चा गरिएको भए पनि प्रेरणाका हिसाबले यो निकै उम्दा रहेको छ । ‘द आल्केमिस्ट’, ‘हिप्पी’ जस्ता पुस्तक पढिसकेकाले ‘लाइक द फ्लोइङ रिभर’ पनि आफ्नो पढ्ने सूचीमा राख्न मिल्छ ।
।९। रोम्यान्सिङ विद लाइफ
यो पुस्तक कुनै समय बलिउडमा एक छत्र राज गरिरहेका देव आनन्दको आत्मवृतान्त हो । हिन्दी सिनेमा जगत्मा सबैभन्दा रुचाइएका अभिनेता बन्न उनले गरेका संघर्ष र सोही समयमा उनका जीवनमा आएका महिलाबारे किस्सा जान्न रुचाउनेका लागि यस पुस्तक उपयोगी हुन सक्छ । आत्मकथा लेख्दा आफ्ना कमजोरी लुकाउने र राम्रा पक्षबारे मात्र बढाइचढाइ लेख्ने सर्जकभन्दा भिन्न देखिएका छन्, देव आनन्द । यसमा उनी सके जति इमानदार
।१०। द लोल्यान्ड
आख्यान लेखनमा आफ्नो छुट्टै छवि बनाइसकेकी झुम्पा लहिरीको उपन्यास साहित्यप्रेमीले पढ्नै पर्ने विचार धेरैले राख्दै आएका छन् । स–साना कुरामा पनि विवेचनात्मक व्याख्या गर्न सक्ने झुम्पाको फ्यान हुन कसैलाई धेरै समय पनि लाग्दैन । नक्सलवादी आन्दोलनका प्रभावलाई एक आख्यानकारको दृष्टिले यस पुस्तकमा सुन्दर रूपमा उतार्न सक्नु झुम्पाको खुबी हो । यो पढिसकेपछि उनका अन्य कृति पढ्न चाहनेले ‘द नेमसेक’ पढ्दा हुन्छ ।
रोमाञ्चक खेलको अवसर
काठमाडौँ — दसैं भनेपछि सबै केही न केहीमा व्यस्त हुन्छन्, नियमित कामकाज छाडेर । तर कुनै खेलको कट्टर समर्थक हो भने दसैं भनेर यसबेला सुख पाइने छैन किनभने यसै समयमा निकै सनसनीपूर्ण केही खेल हुँदैछन्, विश्व खेलकुदमा । विशेषत: फुटबलमा । अनि क्रिकेटमा पनि । यसपालिको दसैंताका हुने केही महत्वपूर्ण खेल :
अचेल युरोपतिर यूईएफए नेसन्स लिगको माहोल चलेको छ । ढिलो–चाँडो यसले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेललाई विस्थापित गर्नेछ । विश्वकप २०१८ सकेलगतै यो प्रतियोगिता सुरु भएको हो र लामो समय लगाएर युरोपका देशले खालि समयमा यो प्रतियोगिता खेल्नेछन् । र, फूलपातीकै दिन परेको छ, फ्रान्सविरुद्ध जर्मनीको खेल । फ्रान्स त रह्यो, विश्वकप विजेता टिम । अनि जर्मनी चार वर्ष अगाडिको विजेता । तर सबैको आँखा जर्मन टिममै हुनेछ र सबैले उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछन्, के जर्मन फुटबल खस्केकै हो अथवा अझै उस्तै छ ?
सुरुमै सही, तर पनि स्पेनी ला लिगको शीर्ष स्थानमा अहिले को छ, अनुमान गर्न सकिन्छ ? अंक तालिकाको नम्बर १ मा बार्सिलोना पनि छैन, रियल म्याड्रिड पनि छैन । छ त, सेभिया । केही दिन अगाडि मात्र हो, लिगमा सेभियाले रियलमाथि सनसनीपूर्ण जित निकालेको थियो । खासमा रियलले अहिले राम्रो खेल्न सकिरहेको छैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो गएयता ।
बार्सिलोनाको टिम त उस्तै छ, तर उसले पनि लय पाउन सकेका छैन । यसै पृष्ठभूमिमा एकादशीको दिन बार्सिलोनाले आतिथ्य गर्नेछ, यही सेभियाको ।
चेल्सीविरुद्ध म्यानचेस्टर युनाइटेड
पोर्चुगाली प्रशिक्षक जोसे माउरिन्होले जति पनि ख्याति कमाए, ती सबै चेल्सीमा छँदै कमाए, चेल्सी छाडेर अरूतिर उनले बदनामी नै बढी कमाए । अहिले उनी म्यानचेस्टर युनाइटेडमा छन् र भनिन्छ, कुनै पनि बेला उनी बर्खास्तीमा पनि सक्छन् । फेरि पनि मोउरिन्होको दम्भ हेरिनसक्नु छ । अहिले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा तीन टिम समान १८ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छन्, म्यानचेस्टर सिटी, चेल्सी र लिभरपुल । म्यानचेस्टर भने आठौं स्थानमा छ । संयोगले एकादशीको दिन म्यानचेस्टर चेल्सीकै भ्रमणमा जाँदैछ ।
‘बल टेम्परिङ’ विवादपछि आफ्ना दुई
प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्टिभ स्मिथ र डेविड वार्नर गुमाएको अष्ट्रेलिया अब पहिले जस्तो टिम रहेन । विशेषत: टेस्ट क्रिकेटमा उसको साख गिरेको छ । अहिले अष्ट्रेलिया र पाकिस्तानबीच टेस्ट सिरिज चलिरहेको छ र यो यूएईमा भइरहेको छ । त्यसको अर्थ यो पाकिस्तानको घरेलु सिरिज हो । फूलपातीको दिन यी दुई टिमबीचको दोस्रो टेस्ट अबुधाबीमा सुरु हुनेछ । पाकिस्तानको सकेसम्म दाउ हुनेछ, अष्ट्रेलियाको साख गिराउने ।
दाम्बुला, केन्डी, कोलम्बो
१३, १७, २० र २३ अक्टोबर
वान डे क्रिकेटका पारखीका लागि आजभोलि पूरा ध्यान वान डे विश्वकपमा छ । इंग्ल्यान्डमा अबको विश्वकप हुनेछ र वान डे क्रिकेटमा यही टिम लयमा देखिने प्रयासमा छ । इंग्ल्यान्डमै क्रिकेट खेलकै जन्म भए पनि यो टिमले अहिलेसम्म वान डे विश्वकप जित्न सकेको छैन । सायद यसपल्ट आफ्नै घरेलु मैदानमा यो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ कि ? यसको सुरुआती परीक्षा श्रीलंकाविरुद्ध चलिरहेको छ । महाअष्टमीको दिन क्यान्डीमा दुई टिम तेस्रो वान डेमा भिड्ने छन् र यो खेल हुनेछ, डे नाइटका रूपमा ।